Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ gbasara Jamaica » Ndị njem nlegharị anya German na-emezi Iju mmiri Jamaica
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Caribbean • Akụkọ kacha ọhụrụ na Germany • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Akụkọ gbasara Jamaica • News • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Minista njem nlegharị anya Jamaica, Hon. Edmund Bartlett - Foto sitere n'ikike nke Jamaica Tourism Board
Minista njem nlegharị anya Jamaica, Hon. Edmund Bartlett kwuru na usoro ọnwa gafere site na Septemba 2021 ruo Ọktoba 2021 na-egosi mmụba 134% na ntinye akwụkwọ sitere na Germany. Dabere na mmụba a, a na-atụ anya na Nọvemba na Disemba ga-agafe ọnwa ndị yiri ya na 2019.
N'ebe a na-eme mkparịta ụka njem, Minista njem nlegharị anya Jamaica, Hon. Edmund Bartlett, kwuru na obodo ahụ nwere ọnọdụ nke ọma inye ezigbo ahụmịhe.
Ọgbakọ a na ndị otu mgbasa ozi ụlọ ọrụ njem njem na Germany, FVW Medien nwere.
Ihe ndekọ gosiri na ndị njem nlegharị anya German egosipụtala ọganihu na njem na Jamaica.
"Jamaica nwere ọnọdụ dị mma iji nye ezigbo ahụmahụ iji meju ihe ọhụrụ ndị a na-achọsi ike ma na-emepụtakwu ahụmahụ ndị a iji dọta ndị njem German. Site ugbu a gaa n'ihu, amụma ntinye akwụkwọ anyị gaara agafewo ụkpụrụ ntinye akwụkwọ tupu ọrịa ọrịa," Minista Bartlett kwuru.
Ọ gbakwụnyere, "N'afọ na-esote na-ele anya ọbụna ihe na-ekwe nkwa, ebe ọnụ ọgụgụ anyị na-emepụta oche 40,000 na Germany maka oge okpomọkụ, nke bụ n'ihi ụbara ụgbọ elu na ịrụsi ọrụ ike nke ndị mmekọ azụmahịa anyị niile."
Onye Minista ahụ kwuru okwu ndị a n'isi taa na mkparịta ụka mkparịta ụka njem na ndị isi ụlọ ọrụ si Jamaica na FVW Medien, otu mgbasa ozi ụlọ ọrụ njem na Germany. A haziri mmemme a ka itinye aka na mkparịta ụka bara uru ma chepụta atụmatụ uto maka ahịa Europe a dị oke mkpa.
"Ihe data anyị na-egosi bụ na ọnụ ọgụgụ ndị German na-achọ ịnụ ụtọ na-aga n'ihu Onyinye nlegharị anya nke Jamaica, na tupu ọrịa na-efe efe, agwaetiti ahụ nabatara ihe karịrị ndị German 20,000 n'ikpere mmiri ya. Mgbe ahụ oria ojoo a dakwasịrị, anyị niile makwaara mmetụta ya na-emebi emebi na ụlọ ọrụ niile n'ụwa niile, ọkachasị njem nlegharị anya, "Minista kwuru.
Agbanyeghị, o mesiri ha obi ike maka nchekwa nke ebe a na-aga, na-ahụ maka ịgba ọgwụ mgbochi dị elu nke ndị ọrụ njem na-arụ ọrụ yana ịdị irè nke Tourism Resilience Corridors, nke gụnyere pasent 80 nke ndị njem nlegharị anya agwaetiti ahụ.
“Anyị ahụlarị mmetụta dị mma nke njikwa COVID-19 nke ebe a na-aga na ntinye akwụkwọ na oche na-abawanye. Site n'ịgbaso usoro anyị siri ike na usoro ndị a, ọnụọgụ ọrịa echekwala nke ukwuu n'ime Resilient Corridors - n'okpuru 0.1 pasent, "o kwuru.
Onye ozi ahụ kesaakwara na ohere ịbanye na Germany na-arị elu, dịka onye na-ebu ụgbọ elu nke atọ kachasị na Europe, Eurowings, mere ụgbọ elu mbụ ya na Frankfurt, Germany, gaa Montego Bay na Nọvemba 4, ya na ndị njem 211. na ndị ọrụ.
Ọrụ ọhụrụ a ga-efe efe ugboro abụọ kwa izu na Montego Bay, na-apụ na Wednesde na Satọde. Ọ ga-abawanye ohere ịbanye n'àgwàetiti ahụ site na Europe. Na mgbakwunye, ụgbọ elu njem ntụrụndụ Switzerland, Edelweiss, malitere ụgbọ elu ọhụrụ na-eme kwa izu na Jamaica ebe Condor ụgbọ elu maliteghachiri ụgbọ elu ugboro abụọ kwa izu n'etiti Frankfurt, Germany na Montego Bay na Julaị.
Okwu Njem FVW, bụ nke anabatara na Montego Bay Convention Center, bụ ahụmịhe ebe a na-achọsi ike nke FVW Median, otu mgbasa ozi ụlọ ọrụ mgbasa ozi na-eduga Germany. Nzukọ otu ụbọchị na-akpọkọta ndị isi ụlọ ọrụ na Jamaica na ndị ọrụ ahia iri anọ na ndị njem si Germany, Austria na Switzerland (DACH).
Ebumnobi ya bụ: ịbawanye mkpughe nke Jamaica dị ka ebe Caribbean na-ahọrọ n'ahịa na-asụ German; Lekwasị anya na ụgbọ elu siri ike na-apụta site na ahịa DACH, yana usoro na mmepe kachasị ọhụrụ na Jamaica; na netwọk iji guzobe kọntaktị bara uru, nghọta na nka.